Ukubaluleka Amazwi — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:36 mna • impendulo
Ndiphantse uzive ngathi Uhambo ULee Pastor yam
Efrem Anderson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:36 mna • impendulo
RubiTootie • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:37 mna • impendulo
Mna ndizigcinile “Ukubaluleka Amazwi” kwi iingcinga kunye nentliziyo yam. Ibe nzima phezu umphefumlo wam. Ukuba imazwi sisigqibo abazi ukuba umlinganiselo ithamo apho ufaka uthando, intiyo, ububele, okanye buhlungu intliziyo somnye, umphefumlo kunye nobomi. Kodwa njengoko ummelwane wam wakhankanya xa wayethetha umqeshi wakhe, “Ngaba akayi kubona ukuba wenza izinto ukuze usixelela ukuba ukwenza??? Kutheni na oyimfama kangaka kuye? Ngaba akeva ethetha? Ngaba akayi kuva amazwi ukuba ephuma emlonyeni wakhe? Andiyiqondi kuye.” Ingaba ukuba umntu lowo abaziboni ngomyalezo? Ngaba wasinda ubomi ngokuthi yokumelana neengxaki ezithile ngokwakho? Ukuba kunjalo, nina nibe yakho inkulu mqobo nentsikelelo blocker. Inkcazo bugeza ukwenza into enye qho kwakhona kwaye ulindele nakuye. Koda kube nini na phambi kokuba uyeke ukuba ongenangqondo? uya kuvumela ixesha elingakanani nokwala izono zakho ukuba uyeke ukuba uhamba ngakumbi kwilizwi likaThixo? Uninzi kuqhubeka ubomi ukuva kuphela into ekulungeleyo ukuba beve, kodwa akazange aphulaphule ngokwenene, ngoko ke, kuze isicelo nantoni Okubalulekileyo. Isizathu soku kukuba xa ngaba uyazi ukuba kukho into engalunganga kufuneka isicelo utshintsho. kunye notshintsho…yinkqubo eyoyikisayo rhoqo buhlungu, kodwa inkqubo yokuba akanakukwazi ukuyiphepha. UThixo iya kutshintsha kuni ubabalo okanye ngaphandle kwayo. Nto ngathi utyando kunye nesizolisi okanye ngaphandle kwayo. UThixo wamnika ukuba ukwazi ukukhetha. Ngoko bakhethe ukuphila ubomi bakho ngendlela encamisayo ukwenza uThixo abanekratshi okanye khetha ukukhangela enye indlela angayikholelwa. Tshintsha Akunakuphikiswa. Ukufa kakhulu. Enye indlela okanye enye…siyakuba ukuphendula enyanisweni yinyaniso yokuba singoobani, zaye, kwaye ziya kuba mna Ndinguye eNdinguye.
Umbuzo Ndisoloko ndizibuza ukuba, “Ngaba ndiya kuyenza uThixo abanekratshi okanye izigqibo zam nesinye isizathu sokuba uThixo ukulila?”
Shakinah Smith • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:37 mna • impendulo
Ukufa nobomi kusemandleni olwimi,
kwaye abo bamthandayo oko baya kudla iziqhamo zayo. IMIZEKELISO 18:21 Uthando IT LOVE IT LOVE IT. INYANI
Aleshia Robinson • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:37 mna • impendulo
Mandivume Ndaziva condenmed ekuqaleni. UThixo kuphinda uphando ubomi bethu ukuze babone ukuba yintoni na engalunganga kunye nathi. Ukhangela kuthi ngoKristu ngesitampu nathi nigqibelele kuye ngoko kuqala imizuzu elishumi okanye ngoko ke, ngob ukuyicima kuba waziva ukuba awayebambe- kakhulu kuthi kwaye kuye. Kodwa nina wajika wajonga embindini ngayo ngeenxa zonke kuye, kwanaleyo EMNQAMLEZWENI nasekupheleni endandiziva lisakheka.
lbsickning • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:38 mna • impendulo
uthando nentlonelo eninzi